Bacela uxhaso emphakathini | News24
Bacela uxhaso emphakathini
Isikole imotala Heights sicela uxhaso.isithombe: nosipho mkhize
ISIKOle samabanga aphansi esibizwa ngokuthi yi-Motala Heights Schoolsicela umphakathi, osobabhizinisi namabandla ahlukene ukuba usixhase.
USihlalo we-Motala Heights School SGB, uBillie Hoosen uthe:
“Okwamanje sidinga izincwadi ukuze silekelele abafundi bethu bakwazi ukuthuthukisa ikhono labo lokufunda. Sidinga ithangi likaJojo ukuze sikwazi ukuthola amanzi ikakhulukazi njengoba sike saba nenkinga yokungenelwa izigebengu zantshonstha bonke ompompi esikoleni. Uma kunokwenzeka sicela umphakathi usoxhase ngokubiyela isikole ukuze sikwazi ukugwema izigebengu ezingena zintshontshe esikoleni. singafisa ukuthi sithole umpheme wohlobo lwe-carpot ukuze abafundi bethu bangabi uma linetha noma bengashiswa ilanga uma bese mhlanganweni.”
Uthe: “ Asinayo imali yokuthenga izinto ezdingekayo esikoleni.
Iningi labafundi livela emindenini ehluphekile futhi iningi labo lisuka ezindaweni ezikude kubalwa eKlaarwater, e-Mariannhill, eTshelimnyama, KwaNqetho, KwaNyuswa naKwaSanti. Sike sabanenkinga yokugqekezelwa izigebengu izikhathi eziningi bantshontsha amapayipi badicelela phansi impahla yesikole. Singaluthokozela noma yiluphi uhlobo loxhaso,” kusho uMnuz Hoosen.
Uma uthanda ukwazi kabanzi nge-Motala Heights School noma uma uthanda ukunikela xhumana noMnuz Billie Hoosen enombolweni ethi: 061 474 4274.